Dhageyso: Saddex wiil oo walaalo ahaa oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Saddex wiil oo walaalo ahaa oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
Dhageyso: Saddex wiil oo walaalo ahaa oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Saddex qof oo dhammaantood ahaa rag isla dhashay, ayaa xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, dhacdadan oo naxdin iyo aragagax ku reebtay magaalada.
Falkan ayaa ka dhacay garaash ku yaalla xaafada Gumareey ama Al-Cadaala oo ka tirsan degamda Kaaraan ee gobolka Banaadir, waxana la sheegay in ninka wax dilay uu goobta ka baxsaday.
Ehelladas addexda Ruux ee la dilay ayaa idaacadda Dalsan ee Muqdisho ku taalla waxay u sheegeen in ninka dilka geystay uu ka mid ahaa askarta ciidamada dowladda Soomaaliya, isla markaana ay qaraabo dhow ahaayeen saddexda ragga ah ee uu dilay.
Qof ka mid ah ehelka dadka la dilay ayaa waxa uu sheegay in ninka askariga ah ee dilka geystay iyo saddexda ruux ee la dilay ay ahaayeen dad Ilmo adeer ah, Isla markaana arrintan loo sababeynayo mid la xiriirta isqabqasbi dhul.
Sidoo kale waxa uu sheegay in markii uu dilka geystay uu baxasaday, haatana ay weli baadi goob ku hayaan askarigaas laamaha amniga Soomaaliya.
Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in meydadka saddexda ruux haatan lagu haayo Xarunta Dambi barista CID-da ee Muqdisho.
Dhacdadan weli kama aysan hadlin maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, balse xiriir aan la sameynay nooma suurta-gelin. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎
Hoos ka dhageyso codka mid ka mid ah ehellada dadka la dilay.